मुख्यमन्त्री शेरधन राईकी श्रीमती जाङमुले दिइन् बालिकालाई चेतावनी्, ‘एउटा मात्र प्रमाण ल्याउ मेरो श्रीमानलाई मै जेल लैजान्छु’ – Sapana Sanjal
April 23, 2021 170
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईकी श्रीमती जाङमु शेर्पाले आफ्ना श्रीमानलाई श्रीमान दावी गर्दै आएकी बालिका खड्कालाई एउटा मात्र प्रमाण देखाउन चेतावनी दिएकी छन् । उनले आफ्ना श्रीमानको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै कडा विरोध गरेकी छन्।
शेरधनलाई श्रीमान दावी गर्दै आएकी बालिकाले विहिवार पार्टी मुख्यालयमा राईलाई गा ली गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि शेर्पाले यस्तो चेतावनी दिएकी हुन् ।
आफूलाई प्रेममा धोका दिएको भन्दै बालिका खड्काले बिहीबार एमालेको नयाँ केन्द्रीय कार्यालयमै पुगेर मुख्यमन्त्री राईलाई भेट्न खोजेकी थिइन्, तर प्रहरीले उनको प्रयास असफल पारेको थियो।
प्रहरीले पक्राउ गरेपछि बालिकाले शेरधनलाई सुन्नै नसकिने शब्द प्रयोग गर्दै गा ली गरेकी थिइन् । सोही प्रकरणमा मुख्यमन्त्री राईकी पत्नी जाङमु शेर्पाले शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत वक्तव्य जारी गर्दै बालिकालाई प्रमाण देखाउन चेतावनी दिएकी हुन् ।
उनले लेखेको स्टाटस जस्ताको तस्तै : समाजिक संजाल र युटुबहरुमा भाइरल बनाइएको घटना र बिषयले मेरो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ ! मेरो श्रीमान बिरुद्व बिगत लामो समय देखि वहाँको वहाँको ब्यक्तिगत र राजनैतिक जीवन समाप्त गर्ने सुनियोजीत षडयन्त्र हुदै आएको र अनेकन घटनाहरु हुदै आएको कुरामा म राम्रो जानकार छु !
म पनि एउटा सचेत महिला हुँ, न्याय अन्याय सबै कुरा बुझ्छु त्यतिमात्र होइन, अन्यायको बिरुद्व बोल्ने र ल ड ने सामाजिक सेवा कर्मी पनि हुँ !
Prevमाओवादी सरकार बचाउने एमालेका यि ४ सांसदको गयो पद
Nextशिशिर भण्डारीलाई गीत चोरेको आरोप लाग्यो । शिशिरले दुखी हुँदै स्पष्टिकरण दिए, वास्तविकता यस्तो रहेछ (भिडियो हेर्नुस)
प्लाज्मा थेरापीले पनि सुधार नभएपछि जटिल बन्दै पूर्वरानी कोमलको स्वास्थ्य, भेन्टिलेटर लगिदै !
अक्सिजन लिएर आउने बिरामीको मात्र उपचार गर्ने अस्पताललाई कारवाही गर्दै सरकार